Jiwire: Ekwentị Kwadoro Ekwentị Ebe | Martech Zone
The JiWire Ọnọdụ Graph ™ ikpo okwu na-eme ka profaịlụ ndị na-ege ntị na-eji ekwentị eme ihe na njikọta nke ọnọdụ, itinye aka, omume igwe mmadụ, gburugburu ya, data nke mbụ na nke atọ, oge nke ụbọchị, ụbọchị izu na ihe ndị ọzọ iji nyefee ndị na-ege ntị nke kachasị mkpa maka akara gị.
JiWire na-anata data ebe nzuzo site na ihe karịrị otu narị nde ngwaọrụ, gụnyere smartphones, mbadamba na laptọọpụ, na-eweta ọkwa dị mkpa. Ọnọdụ data ziri ezi ha nwere ike inweta na-enye ha ohere ịkọwa kpọmkwem ọnọdụ ma mata ọdịiche dị n'etiti onye nọ na ụlọ ahịa vs. ịga ije site na ụlọ ahịa ma ọ bụ naanị na ebe a na-adọba ụgbọala, ọbụlagodi na oke ikuku dị ka ebe mepere emepe.
Ọnọdụ Graph ™ na-enye ndị mgbasa ozi karịa ikpo okwu mgbasa ozi ọ bụla, gụnyere:
Icho ndi na-ege nti
Nchịkọta Mgbasa Ozi
Ahịa Ndị Na-ege Ntị na Mgbasa Ozi
Ihe eserese JiWire bụ ebe nlere anya nke ndị na - ege ntị na - egosipụta nghọta pụrụ iche - dịka ịchọpụta usoro ịzụ ahịa, iguzosi ike n'ihe na ohere asọmpi. Nghọta ha nwere ike inye aka ịkwọ ụgbọ na mmetụta ndị mgbasa ozi na-apụ apụ, dị ka igosi ebe ndị na-ege gị ntị bi, ụlọ ahịa na ọrụ.
Tags: ọdịdị alageolocationjiwireoheredabere na ọnọdụogologomobile ad n'elu ikpo okwumobile mgbasa ozi